Dhamma Video - Browse Media - W - Wuntharnu - á�€á€¶á€žá€¬á‚�á€¯
W - Wuntharnu - ၀ံသာနု - Most Viewed
Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / Others - အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ / S - Shwe Done B Aung - ရွှေဒုံးဘီအောင် ဇီဝိန်ချေ...
ဇီဝိန်ချွေမယ့် လက်နက်ပုန်း - အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာ နှင့် ကိုယ်တော့်ကရုဏာ (ရွှေဒုံးဘီအောင်)
Tags: အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာ ဇီဝိန်ချွေမဲ့လက်နက်ပုန်း သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ၀ံသာနု deadly weapon lethal weapon nuclear weapon latnatpone zeewainchwe shal1a shal2 amyopyoutmharsoekyauksayar amyopyout soekyauk soe kyauk amyo pyout mhar soe kyauk sa yar shwe donebaung Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / S - Sar Taung Sayardaw - ဆားတောင်ဆရာတော် အမျိုးပျေ...
Tags: အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာ ဆားတောင်ဆရာတော် သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ၀ံသာနု salthill sayardaw , sartaung sayardaw amyoe pyout mhar soe kyauk sa yar , wuntharnu , tharthanaparla , sarsanaparla , thar tha na par la , sar sa na par la sartaung amyopyout amyo pyout mar soe kyout sayar soekyout soekyauk amyoepyoutmharsoekyauksayar amyoe pyout mar soe kyauk sayar salt hill sayardaw sayartaw sar taung Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဒို့ဗမာဘယ...
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , ဦးဝီရသူ , ဦးဝီရသူ , ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်) , ဒို့ဗမာဘယ်လဲ , U Wi Ya Thu , Ma Soe Yain , U We Ya Thu , Thar Tha Na Par La , UWiYaThu , U Wi Ya Thu , tharthanaparla , sarsanaparla , sar sa na par la , doeburmaballal , doe burma bal lal , wirathu , wiyathu , werathu , weyathu S - Ashin Ardacsaransi U San Lwin - အရှင်အာဒိစ္စရံသီ (ဦးဆန်းလွင်) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] လခြမ်းနှင...
လခြမ်းနှင့် ကြယ်- ဆရာဦးဆန်းလွင် (အရှင်အာဒိစ္စရံသီ)
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , ၀ံသာနု , ဆရာဦးဆန်းလွင် , သာသနာ့ပါလ , သာသနပါလ , ashin ardacisaransi , u san lwin , usanlwin 786 Crescent Moon and Star Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / W - U Wirathu - ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ်) PeaceMaker Myanmar Monk...
Tags: ဆရာတော် ၀ီရသူ ဦးဝီရသူ ဦးဝီရသူ မစိုးရိမ်တိုက် Uwiyathu uweyathu u wi ya thu u we ya thu ma soe yein masoeyein wirathu wiyathu werathu weyathu Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဘာသာတရားဆ...
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , ၀ံသာနု , ဖိုးပညော (သပိတ်ကျင်း) , tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la wuntharnu phoe pyin nyaw phoepyinnyaw Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ အမြဲရှုံးတ...
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဦးဝီရသူ ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်) အရှင်ဝီရသူ ဦးဝီရသူ အမြဲရှုံးတဲ့ဘောလုံးပွဲ သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ uwiyathu uweyathu u wi ya thu u we ya thu tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la amyalshonetaeballpwalamyal shone tae ball lone pwal wirathu wiyathu werathu weyathu Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / S - Sar Taung Sayardaw - ဆားတောင်ဆရာတော် အမျိုးပျေ...
Tags: အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာ အမျိုးပျောက်မှာ ဆားတောင်ဆရာတော် sartaung amyopyout amyo pyout mar soe kyout sayar soekyout soekyauk amyoepyoutmharsoekyauksayar amyoe pyout mar soe kyauk sayar salt hill sayardaw sayartaw sar taung Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ မိစ္ဆာမျို...
Tags: ဖိုးပညော (သပိတ်ကျင်း) သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဝံသာနု မိစ္ဆာမျိုးခြား လင်ယူမှားသော် သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ tharthanaparla sarsanaprla thar tha na par la sar sa na pra la phoepyinnyaw phoe pyin nyaw shal1 Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ မိခင်ရွာက...
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်) မိခင်ရွာကသာသနာ tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la Uweyathu U weyathu Uwiyathu U wiyathu U we ya thu wi ya thu mikhinywarkatharthanar mi khin ywar ka thar tha nar mikhinywarkasarsana wirathu wiyathu werathu weyathu ဦးဝီရသူ Pages: 123 of 3